Waa maxay RSS?
30 Agoosto, 2007, 15:14 GMT; 18:14 SGA
QM oo u diraysa gudi xaqiiqo raadis Ethiopiya
Dad cunto saf ugu jiro Ethiopiya
In muddo ahba ma jirin hay’ado caalami ah oo ka howlgalo goobaha dagaaladu ka dhaceen ee gobolka Soomaalida Itoobiya.
Qaramada Midoobay, ayaa sheegtay in ay qorshaynayso in guddi xaqiiqo raadis ah ay u dirto deegaanka Soomaalida ee Ethiopia si ay u soo eegaan xaaladda ka taagan gobolka.
Guddigan, ayaa lagu wadaa in uu soo eego eedaha la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo xayiraado dhinaca cuntada ah, oo dowladda iyo mucaaradka ONLF uu midba kan kale ku eedaynay gaboodfallo in uu gaystay.
Dhamaan hay’adaha waawayn waxaa guddiga xaqiiqo raadiska ah ugu jira wakiil, mid ka mid ah wakiilada hay’adaha ayaa BBC-da u sheegay in hay’adooda aysan waxba horay ugala soconin waxa ka dhacaya gudaha gobolka Soomaalida Ethiopia.
Waxaa booqshadan xaqiiqo raadiska ah oo soconaysa muddo todobaad ah ka qaybgalaya barnaamijka cuntada adduunka ee WFP, WHO, santuuqa caruurta UNICEF, iyo hay’ado xuquuqda aadanaha ah ee Qaramada Midoobay, waxay ogolaasho ka haystaan dowladda iyo mucaaradkaba.
Waxay sheegeen in la hadleen odayaasha gobolka si ay isugu dayaan in ay u xaqiijiyaan in sida hadalka ay u dhigeen qof walba uu u ogaado in ay gobolka tagayaan.
Gobolka Soomaalida ee Ethiopia, waxaa muddo dhowr bilood ah ka taagnaa xiisad sare oo keentay in dagaalo ka fool ka fool ah ay ka dhacaan gobolka, la gubo tuulooyin dhowr ah, miinooyin waddooyinka lagu aaso iyo gaboodfallo kale ee dhinaca xuquuqda aadanaha ah.
Dhamaan gaboodfaladan, waxay dowladdu ku eedaysaa in ay ka dambeeyaan mucaaradka ONLF iyo kooxo isbahaysi la ah, hase yeeshee, ONLF lafteeda waxay ku doodaa in dadka la laayay iyo tuulooyinka la gubay ay yihiin dadka rayidka ahaa ee dagaalka aan ku jirin ayna ka dambayso dowladda.
War saxaafadeed ay soo saartay jabhadda ONLF, waxay ku tilmaantay booqshadan tallaabo wanaagsan oo bilow u ah in Qaramada Midoobay ay wax ka qabato masiibada bini’aadamku sameeyay ee ka taagan deegaankooda.
Waxay ugu baaqeen guddiga xaqiiqo raadiska ah in aysan howshooda ku xadidin oo kaliya eegidda xaaladda bini’aadaminimad ee ay u daraan baaritaan dhinaca dambiyada dagaalka ah oo ay sheegeen in dadkooda ay xukuumaddu kula kacday.
Deegaanaada khilaafku aafeeyay ee gobolka Soomaalida Itoobiya, dhibaatooyinka laga soo sheegayo waxaa ka mid ah cunto yaraan, shuban biyood kolera u eg, kuwaasi oo wax ka qabshadooda ay hakiyeen dagaalada iyo ammaan xumida.
WFP, waxay dhowaan sheegtay in ilaa labaatan baabuur oo cunto ah ay u dirtay deegaanada Dhagaxbuur, Aboole, Ararso iyo Birkhod, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in cuntadaas aan wali loo qaybin dadkii loogu talogalay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa in muddo ahba adkayd in la helo warar xaqiiqada ku salaysan oo ka madaxbanaan labada dhinac ee khilaafka, maadaama goobaha la isku hayo ay yihiin deegaano fog fog oo ay adag tahay in si fudud looga helo warar madax banaan.